बिचार सामाजिक सञ्जाल
January 21, 2020 January 21, 2020 Daily News NepalLeaveaComment on कसैको ब्याक्तिगत भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गर्ने युवाहरु लाई ज्वाला संग्रौलाको सन्देश..एक पल्ट अवस्य पढ्नुहोस् ।
‘कसैको ब्यक्तिगत जीबनको पाँच मिनेटलाई यसरी मज़ाक़ नबनाईदिनुस् साथीहरु! तपाईहरुले भनेका जुन जुन काण्डहरु छन् नि, तपाईहरुको पनि गोप्य जीबनमा ती सब चलेका छन्’-ज्वाला संग्रौला
युवा भनेको सोच हो, बिचार हो, सिंगो देश बोक्न सक्ने बलियो मेरुदण्ड हो, परिवर्तनको संबाहक हो अनि आफैंमा एउटा उर्जाशिल शक्तिले भरिएको युगको सुन्दर बिहानी हो! तर केहि साथीहरुले आफ्नो धरातल नै भुलेर , आफ्नो भूमिका नै भुलेर आफूमा भएको चिन्तन र बिचारलाई सामाजिक संजालमार्फत बार-बार दुरुपयोग गरेको देखेर मलाई धेरै दुख लागेको छ! समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन भन्दा नकारात्मक क्रियाकलापलाई भाइरल गरेर कसैको जीबनको हाँसीमज्जा उडाउन र उसको जीबन नै तहसनहस गर्न कसैले नभेट्ने भैसकेछौं हामी!
के हामीले पाएको यो उर्जाशिल समय यसैगरि नकारात्मक कुरा तिर खेर फ्याल्न र कसैको प्राईभेट जीबनको , कसैको ओच्छ्यानको, अनुहारको, शरिरको र इज्जतको ट्रोल बनाएर फेसबुकका भित्ता भित्तामा टाँस्न हो? म निन्दा गर्छु त्यस्ता देखावटी युवाहरुलाई जस्ले देश बिकाशका ठूला ठूला गफ लडाउँछन् तर आफू नकारात्मक सोचको दलदलमा भासिएका छन्! कहिले जापान काण्ड भनेको छ , कहिले अस्ट्रेलिया काण्ड भनेको छ , कसैको ब्यक्तिगत जीबनको पाँच मिनेटलाई यसरी मज़ाक़ नबनाईदिनुस् साथीहरु! तपाईहरुले भनेका जुन जुन काण्डहरु छन् नि, तपाईहरुको पनि गोप्य जीबनमा ती सब चलेका छन्, ख़ाली ती बाहिर नआएर मात्र हो तपाईंहरु तिलस्मी इज्जतको झिनो आवरणमा ढाकिएको! दुधले नुहाएको सन्त महन्त कसैले पनि नबनिदिनुस् किनकी तपाईहरुको जीबनको अँध्यारो प्रहर भित्र तपाईहरुको पनि आकृति कालो र धमिलो छ!
र , एउटा कुरो, त्यो जुन भिडियो छ नि , त्यो बारे सुनेको आधारमा मलाई के लाग्छ भने त्यो भिड़ियोमा केटाको अनुहार देखाएको छैन रे! यसबाट प्रस्ट छ कि ती बहिनीलाई जानी जानी बदनाम गराउन लागेका रहेछन् उनका पार्टनर ! यदि यस्तो हो भने तिन्लाई समातेर आवस्यक अनुसन्धान गरि कड़ा भन्दा कड़ा सजाय दिइयोस् ! पक्रेर तुरन्त नेपाल झिकाएर ती ब्यक्ति माथी अनुसन्धान सुरु गर्न म सम्माननीय आईजीपी सर्बेन्द्र खनाल सरलाई अनुरोध गर्दछु! ती बहिनीले डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन ! खुलेर बाहिर आऊ, र आफूलाई फसाएको हो भने किटानी जाहेरी देऊ! म तिम्रो साथमा छु! तिमीले बाँच्न पाउनु पर्छ !! यो समाज त यस्तै हो, हामी नारीहरुकै कोखमा बस्छ, काखमा खेल्छ , छाती चुसेर हुर्कन्छ! अनि जब हुर्किएर तीघ्रे बन्छ, फेरि हाम्रै शरिरमाथी बेसरम खेल्छ र अन्तत भुँईमा बजारेर कति सजिलै भनिदिन्छ , “ भाग रण्डी! “😔
कार्य स्थल बाट भागेको भनि झुटो आरोप लगाई उजुरी गर्ने सम्म सबै अधिकार साहुमा निर्हित…दक्षिण कोरियामा मजदुर सङ्गठनको आवश्यता किन??
June 22, 2018 Daily News Nepal
इशा गुरुङ भन्नु हुन्छ, ‘हामी कहिले सम्म यस्तै दलबहादुर , लु’टबहादुर , झोल बहादुर , भ्र’ष्ट बहादुर , झु’ट बहादुर , भक्त बहादुर , ठ’ग बहादुर , पार्टी बहादुर भइरहने ?
सत्ता खोसेर लिनुहोस् भन्दै सेनापतिलाई लेखे दुवइबाट युवाले चिठ्ठी :-बिष्णु पौडेल..हेरी सेयर गरौ।।
November 15, 2019 November 15, 2019 Daily News Nepal